Chromebook मा कसरी रोबक्स प्ले गर्ने? - गेमि।
विन्डोजबाट क्रोमबुकमा शिफ्टिंग थोरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ किनकि तपाईं आफ्नो मनपर्ने खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं गर्नुहुन्थ्यो। यसले तपाईंलाई रोब्लक्स जस्ता हाम्रो मनपर्ने खेल खेल्न रोक्न सक्छ, हैन?यदि तपाईंको उत्तर हो हो भने, त्यसोभए चिन्ता नगर्नुहोस् आज हामीले यस पोस्टमा अन्तिम समाधान भनेका छौं जुन तपाईंलाई क्रोमबुकमा रोबक्स कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। उल्लेखित कदमहरू सीधा छन् र धेरै समय लिने छैन।त्यसो भए पछि कुनै कारण बिना हामी कसरी क्रोमबुकमा रोब्लक्स खेल्न सक्छौं हेरौं।
के तपाइँ क्रोमबुकमा रोब्लक्स खेल्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं क्रोमबुकमा आफ्नो मनपर्ने एन्ड्रोइड खेल खेल्न सक्नुहुन्छ वा सक्दैनन् को बारे मा धेरै गलत धारणा रहेको छ। हामी अब यो प्रश्नलाई स्वीकार्ने छौं। तर यदि हामीले यस प्रश्नको उत्तर दिनुपर्‍यो भने यो हुन्छ कि तपाईंले क्रोमबुकमा रोब्लक्स खेल्न सक्नुहुनेछ कि यो 'हो' हो।
गेमि and र सिमुलेसन टेक्नोलोजीमा ठूलो प्रगतिको साथ, चीजहरू नाटकीय रूपमा गेमरहरूको लागि परिवर्तन भएको छ, र हामी अब सजिलैसँग क्रोमबुकमा रोब्लक्स जस्ता एन्ड्रोइड खेलहरू खेल्न सक्षम छौं। रोब्लक्स एक एन्ड्रोइड रन मेशिन खेल हो जुन क्रोमबुकमा खेल्न सकिन्छ जुन तपाईं कुनै एन्ड्रोइड उपकरणमा खेल्नुहुने थियो। हामीले केहि सरल चरणहरू उल्लेख गरेका छौं जुन यदि तपाईं ती पालना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं केवल रोब्लक्स मात्र कुनै पनि एन्ड्रोइड खेल खेल्न सक्षम हुनुहुनेछ।
क्रोमबुकमा रोब्लक्स खेल्ने उत्तम तरिका:
विधि # १: प्ले स्टोरबाट:
क्रोमबुकमा रोब्लक्स डाउनलोड गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको यो तपाईंको क्रोमबुकको गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु हो। यहाँ प्ले स्टोरबाट रोब्लक्स डाउनलोड गर्न केहि चरणहरू छन्।
सुरु गर्नुहोस् प्ले स्टोर तपाईंको क्रोमबुकमा र खोजी रोबमा ‘रोब्लक्स’ खोज्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले रोब्लक्स फेला पार्नुभयो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र यो तपाईंको उपकरणमा स्थापना हुनेछ।
नोट:रोब्लक्स डाउनलोड गर्ने यो तरिकाले मात्र काम गर्दछ यदि तपाईंको क्रोमबुक प्ले प्ले संग उपयुक्त छ। Chromebook का केहि पुराना मोडेलहरूले प्ले स्टोर समर्थन गर्दैन, र तपाईं यसलाई खोज्नुहुन्छ भने तपाईंले एउटा फेला पार्नुहुने छैन। तर यदि तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो भने यो रोडब्लॉकलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
तपाईंको उपकरणको सेटिंग्समा जानुहोस्, बायाँ पट्टी अनुप्रयोग विकल्प क्लिक गर्नुहोस् र प्ले स्टोर सक्षम गर्नुहोस्।
वेबबाट प्ले स्टोर हेर्नुहोस् वा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ । तपाईंलाई पृष्ठमा निर्देशित गरिनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो उपकरणमा रोब्लक्स स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको उपकरणमा डाउनलोड गर्न स्थापनामा क्लिक गर्नुहोस्।
एकचोटि रोब्लक्स स्थापना भएपछि, तपाईं यसलाई अनुप्रयोग ड्ररबाट सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई प्रो जस्ता खेल्न सक्नुहुन्छ। यसले पारंपरिक WASD कुञ्जी र माउस टगलिंगलाई पनि समर्थन गर्दछ।
विधि # २: एआरसी वेल्डरसँग रोबलोक्स स्थापना गर्दै
आजकल प्ले स्टोर तपाइँले हेर्नुहुने प्रत्येक क्रोमबुकमा अनिवार्य हुँदै गइरहेको छ, तर केही पुरानो संस्करणहरू प्ले स्टोरको मजा लिन सक्दैनन्, त्यसैले एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न गाह्रो काम भयो। त्यसोभए, यदि तपाईंको उपकरण तिनीहरू मध्ये एक हो भने चिन्ता नलिनुहोस्, हामी एआरसी वेल्डरको सहयोगमा रोबलोक्स चलाउने एउटा साधारण तरिका बताउँदैछौं।
एआरसी वेल्डर के हो?
एआरसी वेल्डर एक अनुप्रयोग हो जुन तपाईको एन्ड्रोइड अनुप्रयोगलाई बदल्छएक Chrome OS अनुप्रयोगमा। यद्यपि यसमा केहि सामान्य ग्लिचहरू वा बगहरू हुन सक्छन् जुन पूर्ण रूपमा ठीक छ र यो ध्यान दिएर छैन।एआरसी वेल्डर डाउनलोड गर्न र रोब्लक्स स्थापना गर्न, तपाईं यी चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईं कहिँ पनि नडग्न सक्नुहुनेछ।
डाउनलोड गरेर रोबलोक्सको एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् यहाँ र निर्देशिका बचत गर्नुहोस् जहाँ यो बचत भइरहेको छ।
क्लिक गरेर एआरसी वेल्डर विस्तार डाउनलोड गर्नुहोस् यहाँ वा गुगल क्रोम एक्सटेन्सनको भ्रमण गरेर र एआरसी वेल्डरको खोजी गरेर। फाईल आकार २०० एमबीको आसपास छ, यसैले डाउनलोड गर्दा धैर्य राख्नुहोस्।
स्थापना समाप्त भएपछि तपाईले 'छनौट गर्नुहोस्' बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन तल दायाँ कुनामा अवस्थित हुनेछ।
एकपटक सकियो, छान्नुहोस्निर्देशिकाजहाँ तपाईं रोब्लक्स एपीके डाउनलोड गर्नुभएको छ र 'खोल्नुहोस्' ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् कि तपाइँ यहाँ APK लाई मनपर्दैन।
तपाईको डाइरेक्टरी छनौट गरेपछि, अब तपाईलाई परीक्षणको लागि तपाईको एपीके फाइल छान्ने सोधिनेछ। तपाईंले छान्नुभएको डाइरेक्टरीबाट तपाईंको APK छान्नुहोस् र 'खोल्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्। यसले फाईल प्रक्रिया गर्न केहि समय लिन सक्दछ।
एक पटक तपाईंको एपीके लोड भएपछि तपाईंलाई अब केहि सेटिंग्स कन्फिगर गर्न सोधिनेछ।हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि अभिमुखीकरण 'ल्यान्डस्केप' मा चयन गरिएको छ, फारम कारकलाई 'ट्याब्लेट' मा सेट गरिएको छ, रिसाइजलाई 'पुनः कन्फिगर' मा चयन गरिएको छ, र क्लिपबोर्ड पहुँच 'हो' मा चयन गरिएको छ।एकचोटि यी सबै कन्फिगर भएपछि तल दायाँ कुनामा टेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्।
एकचोटि यो सबै भयो, रोब्लक्स स्वचालित रूपमा सुरू हुन्छ, र तपाईं रोबक्स खेल्न सक्षम हुनुहुनेछ WASD कुञ्जी र बाह्य माउस प्रयोग गरेर।
त्यसोभए यो हाम्रो छोटो र संक्षिप्त पोष्ट हो जुन तपाईं Chromebook मा रोब्लक्स सजिलैसँग स्थापना गर्न र खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईं क्रोमबुकमा रोब्लक्स खेल्न यी दुई चरणहरू मध्ये कुनै पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, र हामी निश्चित छौं कि यी उल्लेखितहरूले तपाईंको समस्या हल गर्दछ र तपाईंलाई रोब्लक्स पहिले भन्दा अझ राम्रो खेल्न अनुमति दिनेछ।
यदि तपाइँ हाम्रो चरणहरू प्रयोग गरिसके पछि क्रोमबुकमा रोब्लक्स स्थापना र प्ले गर्न प्रबन्ध गर्नुभयो भने, कृपया तल हामीलाई कमेन्ट बक्समा बताउनुहोस् वा यदि तपाईंलाई कुनै कठिनाई सामना गर्दै छ भने हामीलाई नहिचकिचाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो प्रभावकारी समाधानको साथ फर्काउनेछौं।
Roblox नि: शुल्क डाउनलोड
एक्शन पूर्ण फिल्म अनलाइन निःशुल्क
रोबलक्स आईटमहरू नि: शुल्क कसरी पाउने
तपाईंको हतियार छनौट गर्नुहोस्। अनब्लक
विन्डोजहरुका लागि नि: शुल्क सफारी डाउनलोड गर्नुहोस्
क्रोमकास्ट क्रोम को लागी जोड